Voadika ny 03 Febroary 2013 9:40 GMT
Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina tao am-ponja ilay mpikatroka mafàna fo tsy manana zom-pirenena Abdulhakim AlFahdi, ny 16 Janoary teo, rehefa nandray ny saziny roa taona an-tranomaizina. Nampangain'ny fitsarana fa namely mpitandro filaminana iray tamin'ny hetsi-panoherana natao tamin'ny volana Marsa teo ity mafàna fo ity. Nolazain'ilay mpikatroka mafàna fo fa noforonina mba hiampangàna azy ity fanenjehana ity noho ny hafanam-pony ara-politika amin'ny fangatahana ny zon'ny vondrom-piarahamonin'ireo tsy manana zom-pirenena any Koety. Tany ampiandohan'ny volana Des 2012 izy no nosamborina niaraka tamin'ny rahalahiny AlFahdi Abdulnasser izay tsy voaheloka tamin'io raharaha io ary nafahana. Ity ny ampahany amin'ny dikantenin'ny tatitra nataony araka ny nanoratan'i Jadaliyya azy: